Soo dejisan CrystalDiskInfo 8.10 – Vessoft
Qeybta: Disks adag
Bogga rasmiga ah: CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo – software ah si ay u tijaabiso Oxperts ee drives adag. software The qabata Baadhista iyo bandhigayaa xaaladda farsamo ee cajaladaha ah. CrystalDiskInfo awoodo si ay ula socdaan tilmaamayaasha hawlgalka drives sida heerkulka, xawaaraha wareeg, total markii hawlgalka, tirada inclusions, xogta SMART, iwm software The awood u aragto jadwalka isbedelka heerkulka, maareeyaan goobaha tamarta iyo reserved ah heerka qaylada of drive a. Sidoo kale CrystalDiskInfo ku siinayaan shaqada la drives dibadda iyo storages kale xogta.
Bandhigay tilmaamayaasha farsamo ee disk ah
Monitoring oo ka mid ah xaaladda iyo heerkulka
Bandhigay sifooyinkii technology SMART
Management of goobaha AAM iyo APM
Taageerada ugu drives dibadda
English, العربية, Українська, Français...
Soo dejisan CrystalDiskInfo
Faallo ku saabsan CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo Xirfadaha la xiriira
MiniTool Qaybta Wizard – maamule awood leh oo si buuxda u shaqeeya oo wata wadis adag. Softiweerka waxaa ku jira qalab aasaasi ah oo loogu talagalay shaqada fudud oo leh noocyada kaladuwan ee wadista ah.
Kaaliyaha Qaybta AOMEI – waa aalad lagu maareeyo maaddada diskooga adag. Softiweerka waxaa ku jira aaladaha lagula shaqeyn karo diski-yada waxayna kuu ogolaaneysaa inaad abuurto diskiyada bootable-ka ah.
Tani waa uninstaller software oo awood leh oo ka saari kara nidaamka iyo codsiyada qarsoon ee diiwaangelinta diiwaanka, si khasab ah looga saaro alaab adag iyo maamulida autorun.
Qalabka Ka-qaadista Qalabka ee Aaladda – Qalabka waxaa loogu talagalay in looga saaro barnaamijyada Adaware ee loo yaqaan ’Adaware’ iyo barnaamijyada loo yaqaan ’antispyware’ oo ay ku jiraan raad raacinta diiwaanka nidaamka iyo faylalka ku-meel-gaarka ah.
Bilaashka Torrent Free – waa qalab awood badan oo lagu soo dejiyo faylalka wax lagu gurto. Software wuxuu taageeraa howlaha aasaasiga ah ee macaamiisha torrent wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad dib u eegto feylasha farriimaha badan.
Darawalka ImDisk Virtual Disk Driver – barnaamij softiweer ah ayaa sameeya kumbuyuutarka disk-ga ah ee RAM wuxuuna ku sawiraa muuqaalka CD-ga ama DVD-ga, diskiga diskiga iyo diskiga adag.